Malunga Nathi | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ku-WOWOW, sikholelwa ukuba ufanelwe kokugqwesileyo. Njengenxalenye yenkuthazo yethu yokuqala ukuba ibekho, inkampani yethu izinikele ekukunikeni eyona nto intle esinokuyinika: amaxabiso aphezulu, ezona mveliso zintle, olona lwakhiwo lwanamhlanje, kunye nabo bonke ngenkonzo elungileyo yabathengi eya kuthi yenze uziva ngathi usebukhosini.
Ukuba kwimarike ukusukela ngo-2008, inkampani faowet WOWOW soloko wazama ukunika iimveliso ezisemgangathweni. Kule minyaka, siye sandisa ngononophelo kwaye ngabom ingqokelela yethu ukuba iquke yonke into esinokuyenza kwikhaya lakho:
• Izixhobo zekhitshi: iifolokhwe zasekhitshini kunye nezixhobo zentsimbi ezihlaziyiweyo, ezilungelelanisiweyo nezenziwe ngomgangatho. Thoba iipompo zasekhitshini ezihlangabezana neemfuno zosapho zangoku ekusebenzeni kunye nobungcali kuyilo olulungelelanisiweyo.
Izixhobo zegumbi lokuhlambela: Sithatha obu buchule sinabo kwaye sibusebenzise nakweyiphi na indawo yokuhlambela ngokunjalo. Ukusuka kwizitya zokuhlambela kwizitya zokuhlambela ezinje ngetawuli iileyibheli kunye namaphepha endlu yangasese kwinkqubo yokuhlambela epheleleyo, konke kunikezelwa kwifomu oyifunayo.
Sihlengahlengisa njengoko iinkqubo zethu zolawulo lomgangatho zisenza. Ukuze ubonelele ngeemfuno zakho, siya kuhlala senza oko sinako ukuvelisa ezona zilo zigqibeleleyo, izixhobo zokusebenza kunye nezixhobo, nazo zonke izixhobo ezilungileyo, lonke ngelixa sigcina ithegi yexabiso eliphantsi ukuze ukwazi ukufumana iphakheji eyinyani epheleleyo.
Ukulungele ukwenza i-WOWOW yakho kwi-hub yokuvelisa abavelisi betampu esemgangathweni? Nxibelelana nathi namhlanje ku- [info info] kwaye uqalise uhambo lwakho.
Umxholo wakho: ikhitshi igumbi lokuhlambela Shower